नेपाल राष्ट्र बैंकले ११ अर्ब २० करोडको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने Canada Nepal
नेपाल राष्ट्र बैंकले ११ अर्ब २० करोडको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने
कार्तिक २ २०७७
काठमाडौँ - नेपाल राष्ट्र बैंकले रु ११ अर्ब २० करोड बराबरको टे«जरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । सोमबार बोलकबोल प्रक्रियामार्फत टे«जरी बिल बिक्री गर्न लागिएको बैंकले जनाएको छ ।
बिक्री हुन लागेको कूल टे«जरी बिलमध्ये रु सात अर्ब २० करोड गत वर्ष बिक्री गरिएको टे«जरी बिलको नवीकरण हो भने रु चार अर्ब नयाँ हो ।केन्द्रीय बैंकका अनुसार रु चार अर्ब बराबरको टे«जरी बिलको परिपक्व हुने अवधि २०७८ साल कात्तिक २ गते रहेको छ । (रासस)
कार्तिक २, २०७७ आइतवार १९:१४:२६ बजे : प्रकाशित
प्रदेश २ सरकारले ल्यायो ३३ अर्ब ७९ करोडको बजेट, कुनमा कति ?
धनुषा – प्रदेश नं २ सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ का लागि रु ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि मङ्गलबार प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गर्दै चालूतर्फ रु १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार अर्थात ४६.२६ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार अर्थात ५३.४४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु १० करोड अर्थात ०.३० प्रतिशत बजेट विनियोजना गरेको जानकारी दिनुभयो ।
बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट रु ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख ३० हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट रु १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रु ९ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख र चालू आर्थिक वर्षको बचतबाट रु ६ अर्ब २५ करोड व्यहोरिने उल्लेख गरिएको छ । यसबाट अपुग हुने रु एक अर्ब आन्तरिक ऋण लिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बजेटले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि रु २ अर्ब ३५ करोड र प्रदेशका स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न रु तीन अर्ब १६ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । यसैगरी कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र खस्केको र बेरोजगारी दर बढेकाले बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, रोजगारी सिर्जना तथा पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी रोकथामका लागि अक्सिजन सिलिण्डर, रेम्डिसिभिर, कोरोना परीक्षण गर्ने किट लगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नका लागि रु २० करोड विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामलाई उपकरण खरीद गर्न रु १९ करोड विनियोजन गरेको छ । मिर्गौलाका बिरामीको डायलासिस गर्न ३५ वटा डायलासिस मेसिन खरीद गर्न रु १२ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानका लागि रु ३१ करोड, प्रदेश मुद्रण छापाखाना स्थापनाका लागि रु दुई करोड, नदी नियन्त्रणका लागि रु ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । बजेटले जनकपुरधामको मुजेलियास्थित निर्माण गरिएको मणिपाल कोभिड अस्पताल तथा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठन पाठन शुरुवात गर्नका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न रु १० करोड, प्रदेशको शैक्षिक स्तर उकास्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमूना सामुदायिक विद्यालयको विकास तथा विद्यालयको भौतिक संरचना सुधार गर्नका लागि रु २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी विद्यार्थीको शारिरिक तथा मानसिक विकास गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक जिल्लामा खेल मैदान निर्माणका लागि रु आठ करोड, आदिवासी, दलित, जनजाती, मधेश आन्दोलनका शहिद परिवारको छात्रवृतिका लागि रु २ करोड र एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमका लागि रु एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो ।
बजेटले प्रदेशको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा ५ किलोमिटर कालोपत्र सडक निर्माणका लागि रु ६७ करोड २० लाख, महेन्द्रनारायण निधि आवास कार्यक्रम सुरुवात गर्नका लागि रु ८ करोड, मझौला सिचाई कार्यक्रमका लागि रु ४१ करोड, नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि रु ३० करोड, वडादेखि पालिकाको सदरमुकामसम्मको सडक निर्माणका लागि रु ६८ करोड विनियोजन गरेको छ । यसैगरी बजेटले रामराजा सिंह र गजेन्द्र नारायण सिंहको शालिक निर्माणका लागि रु चार करोड, शहीद दुर्गानन्द झाको शालिक निर्माणका लागि रु २ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै बजेटले प्रदेश सरकारको महत्वाकांक्षी योजना ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ कार्यक्रमका लागि रु २० करोड तथा पोखरी सौन्दर्यकरणका लागि रु ३२ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेश नं २ सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि रु ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजारको बजेट ल्याएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि रु ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।रासस
आषाढ १, २०७८ मंगलवार २०:१२:२७ बजे : प्रकाशित
कोरोनाका कारण पुष्प व्यवसायले दैनिक एक करोड नोक्सान बेहोर्दै
काठमाडौँ। कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण पुष्प व्यवसायले अहिले दैनिक करिब रु एक करोड नोक्सान बेहोर्नुपरेको छ । विश्वभरि फैलिएको कोरोना महामारीको एकपछि अर्को लहर आउँदा यस व्यवसायले विगत एक वर्षदेखि आम्दानी गर्न सकेको छैन र उल्टो दैनिक करिब रु एक करोड नोक्सान बेहोरिरहेको छ ।
त्रासकै बीच लामो समयदेखि बन्द रहेको अन्य केही व्यवसाय विस्तारै खुला हुन थालेका छन् तर यो क्षेत्र कहिले खुल्ने र व्यासायले गति लिने विषय अन्योल नै छ । अहिले मठ मन्दिर, होटल, पार्टी प्यालेस र पर्यटन व्यवसाय सञ्चालनमा नआएकाले यस क्षेत्रले नोक्सानको सामना गर्नुपरेको फ्लोरिकल्चर एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष कुमार कसजु श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कोरोना महामारी नहुँदा सामान्य समयमा फूलको दैनिक रु एक करोडभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको थियो तर अहिले मुस्किलले रु दुई लाखसम्मको मात्र कारोबार हुन्छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले गुनासो पोख्दै भन्नुभयो, “अहिले पनि केही फूलहरु भारतबाट ल्याइएका छन् तर लकडाउन भन्दै स्वदेशमा उत्पादन भएका फूललाई स्थान छैन । त्यसका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गरी एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सहज आवतजावत गर्ने व्यवस्था गरी व्यवसायलाई सामान्यरूपमा भने पनि सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिदिनुप¥यो ।”
उहाँका अनुसार फूलको कारोबार अत्यन्त कम हुने गर्दछ, नहुने नै भन्ने हुँदैन । “अहिले जति फूल प्रयोगमा आएका छन् ती सबै स्वदेशी उत्पादनकै प्रयोग हुन पाए थोरै भए पनि व्यवसाय चलायमान हुने थियो”, उहाँले भन्नुभयो ।
२५ प्रतिशत व्यवसायि अन्य पेशामा पलायन
पछिल्लो समय महामारीका कारण नियमित व्यवसाय गर्न नपाएकाले नोक्सानको सामना गर्नुपरेको भन्दै यस व्यवसायबाट २५ प्रतिशत व्यवसायी अन्य पेशामा पलायन भएको एशोसिएशनले बताएको छ । लामो समयसम्म यस पेशाामा कारोबार नहुँदा बजार लान तयार भएका फूलहरु नष्ट गर्नुपरेको पुष्प व्यापारी राम उप्रेती बताउनुहुन्छ ।
उप्रेतीले विगत १० वर्षदेखि कलङ्कीमा पुष्प व्यासाय सञ्चालन गर्दै आउनुभएको थियो । उहाँका अनुसार महामारीअघि वार्षिक रु १५ लाखसम्म आम्दानी हुने गथ्र्यो तर अहिले अहिले आम्दानी शून्य छ । “दैनिकी चलाउन पनि अन्य विकल्प खोज्नुपरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
पछिल्ला वर्षमा सयपत्री फूलमा पनि देश आत्मनिर्भर हुँदैगएको छ । मुख्यगरी तिहारमा प्रयोग हुने सयपत्री, मखमली र गोदावरी फूलमध्ये केही सयपत्री फूलको माला भारतबाट ल्याउने गरिएको छ । अहिले स्वदेशमै ९५ प्रतिशत फूल उत्पादन हुन थालेकाले पाँच प्रतिशत मात्र भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
अघिल्ला वर्षमा वार्षिकरूपमा रु दुई/तीन अर्ब फूलको कारोवार हुने गरेको थियो । तिहार र अन्य मौसममा गरी रु ११ करोड बराबरको फूल वर्षिकरूपमा विदेशबाट आयात गरिँदै आएको छ । कात्तिकदेखि फागुनसम्म विभिन्न चाडबाड र विवाहको मौसम पर्ने हुँदा फूल बढी प्रयोग हुने गर्दछ ।
विशेषगरी तिहारका लागि सयपत्री र अन्य समयमा सजावटका लागि केही फूल भारतबाट आयात हुने गरेको छ । व्यावसायिकरूपमा ४५० प्रजातिका फूल नेपालमा उत्पादन हुँदै आएको छ । नेपालमा लगभग १५७ हेक्टर क्षेत्रफलमा ७०० व्यवसायीले यसको खेती गर्दै आएका छन् ।
फूलको मागमा आएको वृद्धिसँगै विशेषगरी काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, चितवन, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, गुल्मी, पाल्पा, धादिङ, मोरङलगायत ४१ जिल्लामा ६७५ पुष्पखेती तथा नर्सरी विस्तार भइसकेको छ ।
नेपालमा विसं २००७ देखि शुरु भएको पुष्प व्यवसाय शहरीकरणको विकाससँगै फस्टाउँदै गएको भए पनि महामारीको कारण अहिले भने सङ्कटमा परेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै ३०० व्यसायीले यसको खेती विस्तार गरिसकेका छन् । रासस
आषाढ २, २०७८ बुधवार ०९:५९:२७ बजे : प्रकाशित
# पुष्प व्यवसाय
काठमाडौं - बुधबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । मंगलबार स्थिर रहेको सुनको मूल्य आज तोलामा १ सय रुपैयाले घटेको हो ।
मंगलबार प्रतितोला ९३ हजार २ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज घटेर तोलाको ९३ हजार १ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य पनि प्रतितोला ९२ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य बढेर तोलाको १ हजार ३ सय ६० रुपैयामा नै कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
आषाढ २, २०७८ बुधवार १४:३५:११ बजे : प्रकाशित
असार २५ गतेसम्म कर तिर्न सरकारको आग्रह (सूचनासहित)
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले असार २५ गते सम्म कर तिर्न आग्रह गरेको छ । बुधबार एक सूचना जारी गर्दै विभागले सो जानकारी गराएको छ । विभागले कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद असार २५ गतेसम्म तोकेको जनाएको छ ।
सूचनामा विभागले मूल्य अभिवृद्धि करको हकमा गत फागुन, चैत र वैशाखको मासिक कर विवरण तथा गत माघ, फागुन, चैत र वैशाख महिनाको द्विमासिक र दोस्रो चौमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद असार २५ गतेसम्म तोकिएको जनाएको छ ।
विभागले तोकिएको समयभित्र कर तिरेमा ब्याज नलाग्ने जनाएको छ ।
आषाढ २, २०७८ बुधवार १८:२६:०१ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं । बिहिबार अमेरिकी डलरसहित अन्य देशको विनिमयदर केही बढेको छ ।
आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १ सय १७ रुपैयाँ २ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय १७ रुपैयाँ ६२ पैसा तोकिएको छ ।
एक कुवेती दिनारको खरिददर ३ सय ८८ रुपैयाँ ९० पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय ९० रुपैयाँ ८९ पैसा तोकिएको छ। त्यस्तै जापानी यनको खरिददर १० रुपैयाँ ६४ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १० रुपैया ७० पैसा तोकिएको छ ।
एक साउदी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ २० पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ३६ पैसा तोकिएको छ । एक कतारी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ ६४ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ८० पैसा तोकिएको छ ।
यस्तै एक अस्ट्रेलियन डलरको खरिददर ९० रुपैयाँ १९ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ९० रुपैयाँ ६६ पैसा रहेको छ । एक बहराइन दिनारको खरिददर ३ सय १० रुपैयाँ ४३ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय १२ रुपैयाँ ३ पैसा तोकिएको छ।
त्यस्तै कोरियन वन एक सयको खरिददर १० रुपैयाँ ४७ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रीदर १० रुपैयाँ ५२ पैसा तोकिएको छ । एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १ सय ६५ रुपैयाँ १९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय ६६ रुपैयाँ ३ पैसा तोकिएको छ।
एक युरोको खरिददर १ सय ४१ रुपैयाँ ८८ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर १ सय ४२ रुपैयाँ ६१ पैसा रहेको छ । एक मलेसिया रिंगिटको खरिददर २८ रुपैयाँ ४२ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ५७ पैसा तोकिएको छ ।
आषाढ ३, २०७८ बिहिवार ०९:०२:३९ बजे : प्रकाशित
फेरि ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति ?
काठमाडौं - बिहिबार पनि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । बुधबार तोलामा १ सय रुपैयाले घटेको सुनको मूल्य आज पनि तोलामा १ हजार १ सय रुपैयाले घटेको हो ।
बुधबार प्रतितोला ९३ हजार १ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज घटेर तोलाको ९२ हजार रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य पनि प्रतितोला ९१ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य घटेर तोलाको १ हजार ३ सय ४० रुपैयामा नै कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
आषाढ ३, २०७८ बिहिवार ११:४४:०१ बजे : प्रकाशित